WINE 6.19 inoenderera mberi ichishanda pamwe HID joystycks | Linux Vakapindwa muropa
Ichokwadi kune kwake kusarudzwa kwevhiki mbiri, uye mushure v6.18, WainiHQ akakanda nguva shoma dzakapfuura WAINI 6.19. Kufanana nemavhiki maviri ega ega muchikamu ichi chekusimudzira, iri nyowani Stage vhezheni yeiyo inosanganisira akawanda madiki shanduko, akawanda zvekuti ivo vachiri kufanira kuvapolishisa vasati vaisa ese mune yakagadzikana vhezheni. Pakati pezvinhu zvitsva, chirongwa chinogadzira software yekumhanyisa maapplication eWindows pane mamwe masisitimu anoshanda anoratidza mashoma asiri anotyisa, asi mumavhiki maviri aya marekodhi aputswa.
WINE 6.19 yakagadzirisa 22 bugs, asi yakaunza isingasviki pane 522 kuchinja. Ndichidhonza kubva mundangariro, ini ndingati avhareji yeshanduko yakaunzwa muStage vhezheni ichave yakatenderedza mazana matatu, chimiro icho panguva ino ivo vakapfuura zvakanyanya. Kunyangwe paine vanoverengeka vanogadzira avo vakasaina akawanda ma tweaks, iro basa rakaitwa naRemi Bernon, rinoona nezve gumi nevaviri vavo, rakamira. Iyo rondedzero iwe yauinayo pazasi ndeayo WineHQ inofunga seinokosha zvakakwana kuratidza pakutanga kwekuzivisa kwayo.
WINE 6.19 inosimbisa
IPHlpApi, NsiProxy, WineDbg uye mamwe mamodule akashandurwa kuita PE.
Kuwedzera kushanda neiyo HID joystick.
GDI kernel zvikamu zvakaendeswa kuWin32u.
Rimwe basa rakanangana neDwarf 3.
WAINI 6.19 ikozvino inogona kutorwa kubva izvi madokero kumwe kubatana. WineHQ zvakare inopa ruzivo kurodha pasi izvi uye neramangwana zvigadziriso nekuwedzera iyo yepamutemo repository yeLinux pano, asi inogona zvakare kuiswa pane macOS uye Android. Kana dura rikawedzerwa, unogona kusarudza pakati peshanduro, Stage kana Dev shanduro.
Panguva ino mukusimudzira, isu tave kutosvika panguva iyo Vanoburitswa Vanokwikwidza vachatanga kusvika, asi kazhinji vhezheni inotevera ichave WINE 6.20 uye kuti ichaburitswa pa inotevera Gumiguru 22. Gore rapera makumi maviri neshanu shanduro dzakaburitswa, panguva iyoyo vakatotanga Mvumo Yekuburitswa pavhiki. Kana iyo nyowani Stage vhezheni yasimbiswa, ivo vanozounza mazana ema tweaks zvakare, asi angangoita kwete akawanda sevhiki rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WINE 6.19 inoenderera mberi ichishanda neHID joystycks uye inodarika chinodzivirira che500 shanduko